Serivisy - Yunis International Trading Co, Ltd.
Yiwu YUNIS IMP & EXP CO., LTD dia mpandraharaha mpanondrana matihanina miorina amin'ny tsenan'ny varotra entana sy fizarana entana lehibe indrindra any Chine - Yiwu. Izahay dia manao ny orinasa Yiwu, mpandraharaha mpanondrana Yiwu, mpividy ny Yiwu. Ary nandray anjara tamin'ny andiana serivisy fanondranana. Ny trano fandraisam-bahiny, ny seranam-piaramanidina an-tserasera, ny famokarana vokatra, ny fividianana, ny fitarihana ny tsena, ny fandikana, ny fanaraha-maso, ny fivarotana, ny fanambarana momba ny fadin-tseranana, ny fanaterana entana, ny fandefasana entana iraisam-pirenena (amin'ny alàlan-dranomasina na amin'ny rivotra), ny fanomanana ireo tahirin-kevitra amin'ny famafazana. Amin'ny maha-mpandraharaha sy ny fanondranana an'i Yiwu anao, midika izany fa manana birao ao Yiwu / Shina ianao, koa dia afaka mamonjy fotoana sy vidiny. Tsy voafetra ihany ny serivisy ataonay ao an-tanànan'i Yiwu, afaka manampy anao izahay amin'ny raharaham-barotra any amin'ny toeran-kafa any Shina. Te-ho mpinamana ianao, manana toekarena, azo itokisana ary maharitra mandritra ny Shina Izahay dia manolotra vehivavy mpandika teny maimaim-poana ho an'ny mpitari-dalana amin'ny tsena. Yiwu YUNIS IMP & EXP Co., LTD no safidinao tsara indrindra!
Ny serivisy serivisy:
Alohan'ny hahatongavanao any Yiwu
1. Manoro hevitra anao ny fotoana faran'izay tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana ny asanao any China.Saraho ny mpamatsy ary arindra ny fivoriana ho anao alohan'ny hahatongavanao any China.
2. Alao ny taratasy famonjena an'i Chine (fanasana amin'ny raharaham-barotra na fanasana ofisialy. Afaka manampy anao momba ny olan'ny visa ihany koa izahay)
3. Book hotel ho anao amin'ny fihenam-bidy tsara indrindra.
4. Fidinana amin'ny seranam-piaramanidina ao Yiwu, Shanghai, Hangzhou
Rehefa tonga any Yiwu ianao dia atombohy ny fividianana anao
1. Manoro hevitra anao hitsidika ny tsenan'ny vokatra mety sy mitsidika ny fivarotana tsirairay isaky ny mandeha, na mitsidika ireo orinasa tsara raha ilaina ny tsy ilaina
2. Handika teny sy hifampiraharaha momba ny vidiny eo aminao sy ny mpamatsy
3. Mariho ny filaharana, soraty ny tsipiriany rehetra toy ny: lahatsoratra Tsy misy famaritana, ny habe, ny habe, ny loko, ny antsipirian'ny fonosana, ny metaly koba, miaraka aminy koa ireo sary ho an'ny entana rehetra namboarinao.
4. Manaova taratasy fahazoan-dàlana anao hahafahanao manamarina ny vidiny, fitambaran'ny haben'ny Cube.
Rehefa vita ny fividianana Yiwu
1. Mametraha baiko izay miaraka amin'ny sarin'ny vokatra amin'ireo mpamatsy rehetra
2. Araho ny baiko rehetra hahazoana antoka fa ho vita ny vokatra araka ny fotoana nantenaintsika. Manaova dingana miandalana aminao ny fizotrany
3. Fanafenana trano fitehirizana maimaim-poana, manangona ny entana ho any amin'ny trano fitehirizanay izahay ary mandinika ny entana mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny baikonao ny baiko.
4. Mizara vola amin'ny mpamatsy vola
5. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa dia manisy takelaka fandefasana boky ary handamina ny fandefasana.
6. Manomàna antontan-taratasy momba ny fanondranana. Manambara ny fomba fanao any Shina
7. Manaova tahirinkevitra manafatra firenena
8. Alefaso miaraka amin'i B / L ny antontan-taratasy rehetra, mba hanaovanao ny fahazoan-dàlana Customs.
Rehefa tsy malaza ianao dia Shina. Afaka ny mpanampy mpandraharaha anao izahay
1. Raha manana vokatra mila mitombo ao Shina ianao, dia hiezaka hanome anao ny teny nindramina vetivety izahay.
2. Alefaso aminao ny vaovao farany, malaza sy momba ny vokatra.
3.Manoratra ireo baiko ho anao. Raha nandidy avy amin'ny orinasa hafa ianao, dia afaka mankany amin'ny orinasa izahay ary hijery ny kalitao, ny habetsahany, ny antsipirian'ny fonosana ary ny hafa rehetra. Ary avy eo alefaso aminao ny tatitra fizahana aminao mba ho azo antoka ny baiko mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
4. ary manambatra ny entan'ny mpamatsy samihafa amin'ny faritra samihafa ao amin'ny trano fitehirizanay maimaimpoana.
1 、 YUNIS dia manana tambajotra orinasa lehibe ary orinasa dimy manokana. Afaka mividy entana amin'ny vidin'ny orinasa ianao.
2 、 YUNIS ekena ny baiko kely / fanadinana izay omen'ny orinasa.
3 、 YUNIS QC vehivavy dia manaraka ny baiko rehetra napetraka mba hifehezana ny kalitao.
4 、 YUNIS dia manaiky ny famolavolana sy famokarana mahazatra.ODM, ny tetikasa OEM dia raisina indrindra.
5 、 YUNIS dia afaka manolotra ny mpanjifanay amin'ny vidin'ny fandefasana mifaninana satria manana mpiara-miasa efa azo antoka tsara izahay.
6 、 YUNIS dia manana trano fitehirizantsika manokana ary manambatra ny entan'ny mpamatsy isan-karazany amin'ny faritra samihafa ao amin'ny trano fitehirizanay.